🥇 ▷ Soo daadinta Apple waxay muujin kartaa muuqaal xiiso leh oo cusub oo taxane ah Apple Watch 5 ✅
Soo daadinta Apple waxay muujin kartaa muuqaal xiiso leh oo cusub oo taxane ah Apple Watch 5
Markay tahay Sebtember oo keliya geeska, iPhone daadinta waxay u badan tahay inay soo kabtaan, iyaga oo xadaya iftiinka baaxada dhammaan waxyaabaha kale ee daadadku si joogto ah u qorsheeyeen. Subaxaan oo keliya ayaan la wadaageynaa waxa noqon kara fiidiyowgii ugu horreeyay ee wax ku ool ah ee iPhone 11 Pro. Laakiin moodooyinka cusub ee iPhone ma noqon doonaan aaladaha kaliya ee lagu soo bandhigo dhacdada Sebtember ee Apple. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa inaan aragno Apple Watch ee soo socota, taasoo soo jeedineysa shaandheyn cusub oo taageeri doonta cabirka cadaadiska dhiigga.
Ka baxsashadan ‘Apple Watch Series 5’ ayaa ah mid sharaf leh Mr White ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray, taas oo aan u badnayn sida qaar ka mid ah miirayaasha kale ee aan daboolno, laakiin waxay bixisay muuqaal xiiso leh oo ku saabsan badeecada Apple wax ka badan hal dhacdo waqtiyadii la soo dhaafay. Nasiib darrose, ma uusan sharraxin sababta uu ugu maleynayo Apple Watch cusub Waxaad bixin kartaa akhrinta cadaadiska dhiigga, iyo sawirada aad ku soo biirtay waxay u muuqdaan kuwo ka socda tusaale Apple Watch jir ah oo aan xiriir la laheyn:
Waxba kama jiraan iyadoo la sheegayo inay mudan tahay in daadintaan lagu daadiyo cusbo, laakiin maahan daadinta ugu horreysa ee Apple Watch Series 5 toddobaadyadii la soo dhaafay. Khamiistii la soo dhaafay, isticmaale bartiisa Instagram ayaa soo dhigay sawir Apple Watch ah oo leh nambarka A2157, kaasoo xiriir la leh jiil cusub oo aalado Apple Watch ah, sida ku xusan dukumiinti rasmi ah oo Apple loo soo bandhigay Guddiga Dhaqaalaha Eurasian maalmo ka hor.
Waxaa xusid mudan in xitaa haddii sawirrada Mr. White aysan ka tirsaneyn taxanaha Apple Watch 5, Bloomberg waxay soo warineysaa in isbeddelada Apple Watch Sanadkan ay noqon doonaan “ka xasilloon” marka loo eego sanadka 2018, iyadoo shirkaddu ay diiradda saari doonto wax badan “cusboonaysiinta”. ee barnaamijyada loo yaqaan ‘watchOS 6’ iyo guryaha cusub oo la dhammeeyo “, sida dhoobada iyo aluminium.